कला क्षेत्रका सञ्चारकर्मी सांकेतिक विरोधको शैलीमा जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
कला क्षेत्रका सञ्चारकर्मी सांकेतिक विरोधको शैलीमा
जनबोली न्युज डेस्क, काठमाडौ । गत साता एमाओवादी लगायत १९ दलले संविधान सभा भित्र नाबालक बच्चाको जस्तो हत्कण्डा मच्चाएर संविधान सभा समक्ष कन कुर्सी तोड्फोड गर्ने काम गरे ।
नेपाली राजनीतिमा दलहरुले गरेको यो विरोधको शैली विलकुलै नौलो भने पक्कै पनि होईन । अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा यस्ता कु–कृत्यका खण्डन भईरहेका छन् । त्यस्तो अमर्यादित कार्य हुँदा नेतृत्व पंक्तिमा पुगिसकेका डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड समेतले भने तमासा हेरीरहे मात्रै ।
जे होस् हाम्रा नेताहरु महान् छन् । ती तीनै नेता हुन् जस्लाई हामीले भोट हालेर संविधान निर्माण गर्न पठाएका थियौँ । अलिकति त दोष हाम्रै पनि छ । उनीहरु आज संविधानलाई निर्णायक बिन्दुमा लैजान असहमत भईरहेका छन् । नेताज्यू, कुर्सी तोडेर मात्रै समस्या समाधान हुने भए, यो संसारको अस्थिपञ्जर उहिल्यै गलिसक्थ्यो ।
नेपाली म्युजिक भिडियोमा नाम चलेका निर्देशक हुन्, विशाल भडारी । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सांकेतिक विरोधको शैली (प्रतिस्पर्धा) भन्दै तस्वीर पोष्टेका छन् । भण्डारीले पत्रिकामा छापिएको एक कार्टुनको हास्यास्पद टिप्पणी गर्दै भने, ‘हामीले तेत्रो कुर्सी भाँच्यौ, माईकले निसाना ताक्यौँ, जुत्ता खेलेर पनि हानैकै हौँ, बच्चाको जस्तो लिँढेढिपी गरी बुई चढेर मर्यादापालक सँग पनि सिँगौरी खेल्न पछि परेनौँ । सबै काम हामी एक्ललैले गर्नुपर्ने, कांग्रेस–एमाले सिन्को पनि नभाँच्ने, क्यार्नु त अब ।’ भण्डारी नेपाल वान टेलिभिजनमा प्रसारण हुने हेलो नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता पनि हुन् । त्यस्तै गरी मोडल वर्षा राउत पनि च्यालेन्ज गर्दै कुर्सी तोड्न पछि परिनन् । यस कार्यमा हाल नेपाली कला क्षेत्रका मान्छेहरु पनि आफ्ना फोटो अपलोड गर्दै अघि सरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अहिले यो भाईरल बनेर फैलिरहेको छ । कुनै बेला आईस बक्स च्यालेन्ज भनेर युटुबमा सनसनी मच्चीएको थियो ।
जारी संविधान सभामा जुन किसिमको हर्कत भयो, त्यस्को विश्व मानचित्रमा सर्वत्र खण्डन भएको छ । विवादित मस्यौदामा विपक्षी दलहरु सहमत हुन नसक्दा बितण्ड मच्चिएको थियो । यद्यपि यस्ता कार्यहरु पश्चिमा मुलुकहरुमा भने नभएका होईनन् । छिमेकी राष्ट्र भारत, दातृ राष्ट्र जापान, केन्या, टर्की, युक्रेन जस्ता मुलुकमा रगताम्य भएका अवस्था छन् ।
तसर्थ खबरदार संविधान बनाउन तिर कसरत गर, नेता हो । सहमतिमा जाउ, त्यसको अरु विकल्प खोज । नेपाली जनताको अपमानको भागिदारी र तिरस्कृत हुन नपरोस् । एकजुट भएर ढिक्का बन, तब न समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ ।